ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် လေငန်းရောဂါအကြောင်း (၄)
ရှင်းပြပါဆရာ . . . (၂၀) ထူးဆန်းတဲ့အကြောရှုံ့အကြောဆွဲရောဂါ
၁ ကီလိုမီတာအကွာမှာ နေထိုင်သော်လည်း ၃၉နှစ်ကြာမှ မိသားစုနှင့် ပြန်လည်ဆုံဆည်းခဲ့သည့် တရုတ်အမျိုးသမီး
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အသက် ၃ ရက်သမီးအရွယ်ကတည်းက မိသားစုရဲ့ စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတဲ့ တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ အသက် ၇၀ အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက သူတို့ဟာ တရုတ်အရှေ့တောင်ပိုင်းမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာ တစ်ကီလိုမီတာသာဝေးကွာတဲ့အရပ်မှာ အတူတကွနေထိုင်ကြပေမယ့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး သိရှိခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေပါ လာရောက်ခဲ့ကြတဲ့...
နှလုံးကျန်းမာဖို့ ဘာစားပေးရမလဲ . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နှလုံးဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးကျန်းမာဖို့အတွက် အောက်ပါအစားစာတွေကို စားပေးရပါမယ်။ – ဆီ သံလွင်ဆီမှာ ကောင်းတဲ့အဆီပါဝင်မှု မြင့်မားပါတယ်။ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ပါဝင်မှုများတဲ့အတွက် နှလုံးသွေးလွှတ်ကြော မပိတ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာပါတဲ့...
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁) အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေကဒိန်ချဉ် ပိုစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ အမျိုးသမီး ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းက ဒိန်ချဉ်စားနေကြပြီး အမျိုးသား ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းကသာ စားလေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ (၂) ဒိန်ချဉ်စားရင်...
ဆရာဝန်ဘ၀နဲ့ ဆရာဝန်စိတ်ဓာတ် (၂)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဆရာဝန်တွေ ဖြစ်လာတော့ “ဆရာဝန်ကောင်း” တစ်ဦးဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်သွန်သင်ပေးကြဖို့ ဆေးကျောင်းက ဆရာ၊ ဆရာမတွေမှာ တာဝန်ရှိပါသလားဆိုရင် “ရှိပါတယ်”လို့ဖြေရပါမယ်။ မှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးဘ၀အတွေ့အကြုံ ခံယူချက်တွေ မတူညီကြပါဘူး။ စာတွေ့နဲ့ လူနာဆေးကုပေးတာ...
တစ်အိမ်လုံးမီးလောင်သောကြောင့် မိသားစုတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးလိုက်ရသည့် ၈နှစ်အရွယ်ကလေးလေး ခြေတု၊လက်တုရရှိ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်မှာနေထိုင်တဲ့ မိန်းကလေးငယ်လေးဟာ ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်အတွင်းမှာ လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ အသည်းနှလုံးကိုဖမ်းစားနိုင်လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းကရှို့မီးတစ်ခုကြောင့် ဆက်ဖိုင်ယာတယ်ရီတို့အိမ်တစ်ခုလုံး မီးလောင်သွားခဲ့ပြီး သူရဲ့ဖခင်နဲ့မောင်နှမသုံးယောက်တို့ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ မီးတောက်တွေဘေးက သူ့ကိုကာပေးရင်းသေဆုံးသွားတဲ့ ဖခင်ရဲ့ဘေး အပျက်အစီးအစအနတွေကြားမှာ ဆက်ဖိုင်ယာကိုအသက်မသေဘဲ တွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။ မီးကြောင့်သူ့မှာ...
လရိပ်မေ မျက်နှာအသွင်အပြင်ကို ချက်ချင်းပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ အလွယ်ဆုံး မိတ်ကပ်က ပါးနီပါ။ ပါးနီလိမ်းလိုက်တာနဲ့ လှပပြီး ရှက်သွေးဖြန်းတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေပါတယ်။ အမျိုးအစားများ (၁) ပေါင်ဒါအမျိုးအစား ပါးနီ (၂) ခရင်မ်အမျိုးအစား ပါးနီ (၃) ပါးနီအရည် (၁) ပေါင်ဒါအမျိုးအစား...
လူအများဖြစ်နေကျ ပြဿနာတို့အတွက် အလွယ် လှည့်စားနည်းများ
– စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်နေသလား သွားတွေကြားမှာ ခဲတံတစ်ချောင်း ထည့်ထားရင် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ တင်းအားကို လျော့ကျ စေနိုင်ပါတယ်။ ခဲတံတွေကို မကိုက်ပါနဲ့၊ သွားတွေကြားထဲ ခဲတံထားရုံနဲ့ မေးရိုးကြွက်သားတွေကိုအနား ရစေပြီး ခေါင်းကိုက်တဲ့ ဝေဒနာသက်သာစေပါတယ်။ – အိပ်မပျော်ဘူးလား တေးဂီတဆိုတာ...
သင်က အသက်ရာကျော် နေရမယ့်သူလား
မီမိုး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) အခုအခါမှာ အသက်ရာကျော်ရှည်သူဦးရေက တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ တိုးလာပါတယ်။ သက်ရှည်ကျန်းမာတဲ့ ဘ၀မှာ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေခွင့်ရတာဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်လို့ သင့်အနေနဲ့ အသက်ရာကျော်ရှည်တဲ့အထိ နေရမှာလားဆိုတာ အောက်ပါအချက်တွေ ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းကြည့်ရအောင်။ အသက်ငယ်တယ်လို့ ခံစားနေရသလား အသက်က ၅၀...
Page 250 of 408« First‹ Previous246247248249250251252253254Next ›Last »
ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက် အူကျွံ၍ မွေးလာသောသမီးပုံကို မိခင်ဖြစ်သူမျှဝေ
၁၅ နာရီကြာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ သယ်ဆောင်လာရတဲ့ ကိုယ်ချင်းဆက် အမြွှာညီအစ်မ ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်
ငှက်ပျောသီးထဲပါသော ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်က နှလုံးအမောဖောက်ခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်းတို့ မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေးနိုင်
ကြိုးပြတ်တဲ့ စွန် . . .
နောက်ကျောမှာအရည်အိတ် ပြီးတော့ ပြားနေတဲ့ဦးခေါင်းနဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်
ပေါင်မှ ၈၄ ပေါင်အလေးချိန်ရှိ အကျိတ်ကြီးကြောင့် နှစ် ၄၀ တိုင်လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘဲ အိမ်တွင်းပုန်းနေထိုင်နေသူ
တီဘီဆေး သောက်နေချိန် လိုက်နာသင့်သည့် အချက်များ